Home Wararka MW Farmaajo oo magacaawday Garsoorayaal u adeega danahiisa
MW Farmaajo oo magacaawday Garsoorayaal u adeega danahiisa
MQ Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu ku magacaabay Garsooreyaal ka tirsan Maxkamadda Sare ee dalka. Qoraalka uu soo saaray Farmaajo ayaa waxa uu ku magacaabay Garsooreyaal uu isaga soo xushay kana tarjumi doono danahiisa gaarka ah. Waxa uu horay u soo magacaabay will dhaliyaro ah oo aan wax qibrad ah u lahaynin garsoonka dalka in uu hogaamiyo maxakamada sare, Baashe Yuusuf Axmed
1-Garyaqaan Xasan Cabdinuur Cabdirixmaan.
2- Garyaqaan Abuukar Axmed Cali (Qasaali).
3-Garyaqaan Cabdulqaadir Idiris Ciise.
4-Garyaqaan Suleymaan Maxamed Maxamuud.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkeeyey garsooreyaasha uu magacaabay in ay dhawraan sarreeynta sharciga dalka iyo in ay si siman ugu adeegaan shacabka. Su’aasha la iswaydiinayo ayaa waxa ay tahay halkee buu ku danbeeyay Baarlamaankii Soomaaliya oo ahayd hay’adii la xisaabtami lahayd Madaxweynaha iyo Xukuumada.
Previous articleDFS oo looga digay heshiiska ay la gashay 31 shirkado Kaluumaysi
Next articleElite force formed in Ethiopia to protect leaders
Wargeysyada Caalamka oo ku sifeeyay [Farmaajo] kaligii talis diidan Doorasho